Banyere Anyị - Hebei Chenli rigging Group Co., Ltd.
Hebei Chenli Group Co., Ltd. (Chenli Group) ijikwa 3 nwekwa enyemaka na 4 ụlọ ọrụ na-achịkwa alaka ụlọ ọrụ, dị na obodo nke ibuli ma na-agbagha ngwaahịa na mpaghara Hebei, nke bụ nnukwu ụlọ ọrụ pụrụ iche na nyocha 、 na-arụpụta na n'ichepụta ngwaahịa na ngwaahịa. Ọtụtụ usoro nke ihe karịrị 3000 nkọwa dị iche iche, imepụta na ikike nnabata eruola nde nde asaa. Ike anyị zuru oke na-aga n'ihu ndị asọmpi na ụlọ ọrụ anyị.
Hentù Chenli nwere teknụzụ mmepụta teknụzụ dị elu na ndị otu njikwa, sistemụ njikwa usoro ọgbara ọhụrụ na teknụzụ mmepụta teknụzụ njikwa usoro arụmọrụ, ka emechara mgbanwe site na njikwa nchịkwa n'ime njikwa mgbochi. Ndị na-arụ ọrụ n'usoro na-arụ ọrụ nke ọma yana ogo ngwaahịa dị nso ma ọ bụ karịa 4σ
Kemgbe 2000, Chenli Group ji ngwa agha jiri njikwa sayensị na teknụzụ sayensị. Companylọ ọrụ anyị nyere nde mmadụ RMB nde abụọ, wuru ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ nyocha nke ọma. N'otu ụlọ ọrụ ahụ tupu Chenli Group gafere asambodo njikwa njikwa mba ofesi ISO9001. Na 2005, ngwaahịa a gafere European CE, Germany GS mma ngwaahịa na asambodo nchekwa. Otu Chenli n'otu n'otu n'afọ 2008, 2010, na 2012 nwetara "ebuli yinye", "eweli èbè", "eweli èbè mbukota igbe" atọ mba nchọpụta Kemịkalụ,
Ebumnuche ụlọ ọrụ nke Chenli Group bụ na onye ahịa ahụ ziri ezi ruo mgbe ebighị ebi. Iguzosi ike n'ezi ihe na idebe okwukwe, na-azụ ahịa nke ọma, ugbu a Chenli Group maka mba anyị ihe karịrị 100 nnukwu ụlọ ọrụ, ọrụ mmemme nke mba enyela ụdị dị iche iche na nchekwa na ntụkwasị obi nke ngwaahịa. Ngwaahịa na-ọtụtụ-eji ígwè, nkà mmụta banyere ígwè, electric ike, ụgbọ okporo ígwè, mmiri nchekwa na oru, ọdụ ụgbọ mmiri, ụgbọelu, miltary, ụgbọala, mmanụ ala na chemical ụlọ ọrụ wdg Chenli Group si ngwaahịa na-ere ihe karịrị 30 anụ ụlọ ógbè, obodo na 100 mpaghara, dị otú ahụ dị ka Middle East 、 European Union, Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia, North na South America wdg. Mbupụ na ihe karịrị mba 50 na mpaghara .Products na-ọma natara na tụkwasịrị obi site customers.Under gị nkwado Chenli Group aghọwo ụlọ ọrụ management ọhụrụ na nkà na ụzụ onye ndu ohuru .Chenli Group ga eme ka ndi ahia chenli nwee aku na uba ebighebi, Chenli Group di njikere ikwado gi.
Enterprise jikwaa ebumnobi
Ọdịdị dị elu, ọkwa dị elu, ka ndị ahịa nwee mmetụta nke ịnọkwu na ntụkwasị obi, ntụkwasị obi, mfe!
Onye ndu nke rigging ụlọ ọrụ management ọhụrụ na teknụzụ innovation.Chenli Group dị njikere mgbe niile na-eguzo n'akụkụ gị, ga-eme ka ndị ahịa ahịa Chenli nwee akụnụba ruo mgbe ebighị ebi.
Ọnwụ, na rigging ụlọ ọrụ elu management uru, nkà na ụzụ uru, ika uru, mgbe niile izute omenala chọrọ.
Kemgbe 1991, Companylọ Ọrụ Isi
Kemgbe 2005, Qing yuan Company
Kemgbe afọ 2012, ụlọ ọrụ Boye
Kemgbe 2020, Jlọ ọrụ Jiangsu
CHENLI ngwaahịa kpuchie ụwa nile